Apple gosipụtara iPhone 6 na ọkwa | Akụkọ akụrụngwa
Amalitela apụl isi nkeji ole na ole gara aga ma n'ime ya anyị nwere olile anya ịmata ihe nzuzo niile gbara iPhone 6 na nsụgharị ikpeazụ nke iOS 8. Iji mee ka agụụ gụchaa na dị ka ọ dị na mbụ, Tim Cook emeghewo ihe omume ahụ wee ju anyị anya na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụlọ ọrụ ya , ihe a niile mgbe vidio vidio nke, ọzọ, ọ na-achọ ijikọ ngwaahịa Apple na mmetụta.
Tim Cook chetara na ihe dịka afọ 30 gara aga, Steve Jobs webatara kọmputa mbụ nke Macintosh na mba ụwa, ngwaahịa nke gbanwere ụzọ anyị si ele kọmputa anya na ọkwa ụlọ, yabụ afọ iri atọ ka nke ahụ gasịrị, ha nwere ngwaahịa ọhụụ iji kụziere anyị.
N'afọ gara aga, e gosipụtara ụdị iPhone abụọ, ihe mere na nke mbụ ya na akụkọ ihe mere eme nke Apple na afọ a ha kwughachiri ya na ụdị ọhụụ nke bụ otu ihe ahụ agbapụtala n'ime ọnwa niile a Nke a bụ iPhone 6 dị ka Tim Cook, ngwaọrụ kachasị elu nke oge niile n'akụkọ ihe mere eme nke Apple.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ banyere nke a iPhone 6? Onye mbu mbu bu ihe nlere gi, a ọgbọ ọhụrụ nke Retina Display nke dakwasiri na ihe nlere anya nke nwere nkpokoro nke 4,7 na nke ozo nwere iboju 5,5. Na mgbakwunye na ihuenyo dị elu, Retina Display HD a na-enye gamut agba dị nso na sRGB, sistemụ ọkụ dị ntakịrị na iko.
Newdị ọhụrụ nke iPhone 6 dị ezigbo mkpa, kpọmkwem, 6,9 milimita maka ụdị 4,6-inch na 7,1-millimita n'ihe gbasara iPhone Plus, aha nke Apple jiri maka ụdị iPhone 6 nwere ihuenyo 5,5-anụ ọhịa.
N'ihe banyere iPhone 6 Plus, enwere ike iji ya na ọnọdụ ihu igwe yana interface iOS ga-emegharị maka nghazi ọhụụ a. A ga-enwekwa ụzọ iji jiri ọnụ ya jiri otu akaNaanị ị ga-pịa abụọ na Touch ID na ihe niile ga-adị na ọkara nke ihuenyo ahụ ka ọ wee nwee ike ịnweta ya na mgbe anyị gwụchara, pịa ọzọ na ihe niile ga-arụ ọrụ zuru oke.
Banyere ngwaike nke iPhone 6 a, ma ọnụ na-ewepụta ọgbọ ọhụrụ nke Apple si SoC nke a na-akpọ ugbu a Apple A8. Chipset a na-ejigide ihe owuwu 64-bit mana arụpụtara ya na-agbaso usoro 20-nanometer, na-enye ngụkọta nke 2.000 ijeri transistors. Ihe si na ya pụta bụ ngwaike a 25% dị ike karị karịa iPhone 5s, 50% na-arụ ọrụ nke ọma karị ma, dị ka eziokwu siri ike, 50 ugboro ngwa ngwa karịa iPhone mbụ nke emere na 2007.
Na nkenke, iPhone 6 a na-ekwe nkwa ike mana karịa ihe niile, arụmọrụ dị elu karịa nke mere na obodo kwụụrụ ha enweghi ntaramahụhụ dịka ha mere na mbụ. The iPhone 6 ga-enye 14 awa nke nnwere onwe na mkparịta ụka n'okpuru 3G, ụbọchị 10 na njikere na 11 awa na-egwu vidiyo. N'ihe banyere iPhone 6 Plus, nha ya buru ibu na-enye ohere nnwere onwe ka ukwuu, na-eru 14 awa nke oge okwu, ụbọchị 16 na njikere na 14 awa na-egwu vidiyo.
Banyere ngalaba foto, igwefoto azụ ka dị 8 megapixels Ọ na-enyekwa ezigbo ụda ọkụ ọkụ, ị maara, ya na ojiji abụọ dị iche iche iji nweta agba ndị ọzọ mgbe anyị jiri ya na ọnọdụ ọkụ.
Ogo nke pikselụ nke ihe mmetụta ahụ na-abawanye nha ya na oghere na-anọgide na oghere nke f / 2.2, na nkenke, mma sensọ e mma iji nweta foto ka mma. Na mgbakwunye na nke dị n'elu, ewepụtara teknụzụ Focus Pixels nke na-enye ohere ịchọpụta ma ọ bụrụ na ihe dị na ma ọ bụ na-apụ na nkebi.
Ọ na-amalite ngwa anya image stabilization usoro na teknụzụ mbelata mkpọtụ maka foto ndị ahụ ebe ọkụ dị ụkọ. N'ikpeazụ, ọnọdụ panoramic nwere ike ịse foto ruru 43pipixels.
Banyere vidiyo, iPhone 6 nwere ike ịdekọ 1080p 60fps vidiyo ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ọnọdụ ngagharị nwayọ, ugbu a anyị ga - enweta ọnụego nke 240fps iji nweta nsonaazụ dị egwu n'ezie.
Nnweta na ahịa nke iPhone 6
The iPhone 6 ga-abụ dị na nsụgharị nke 16GB, 64GB na 128GB maka ọnụahịa ị hụrụ na onyonyo a, agbanyeghị na ejikọtara ha na ọnụnọ afọ abụọ na onye ọrụ. Anyị ga-echere oge ole na ole ịmara ọnụahịa nke iPhone 6 na nsụgharị ya n'efu. N'ihe banyere iPhone 6 gbakwunyere, ọnụahịa na-abawanye site na 100 dollar na nke ọ bụla.
The iPhone 6 ga-akụzi ife mbu nke mba ọzọ Septemba 19th, ịbụ ndoputa dị site na Septemba 12.
N'ikpeazụ, iOS 8 ga-adị maka nbudata na-amalite na Septemba 17.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Apple na-ewepụta iPhone 6